dia naorina tamin'ny 1984, mpikambana ao amin'ny Tianjin Food Group Co., LTD, ny orinasanay dia miorina ao amin'ny NO.1 Shengchan West Road, Majiadian Industrial Area, Baodi District, Tianjin City, Total faritra dia 46620 metatra toradroa, manana renivohitra voasoratra anarana Dolara 8 tapitrisa US.
Tamin'ny volana Desambra 2004, ny orinasa dia nitarika ny indostria iray ihany tany Sina mba handalo ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena ISO9001: 2000, ny vokatra rehetra dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ary nahazo ny mari-pahaizana Oeko-Tex 100.
Ny vokatra lehibe ao amin'ny ozinay dia misy farango sy tadivavarana miaraka amin'ny Nylon na Polyester, Plastika hook, Hook ary Loop fanodinana lalina sy kofehy zaitra. Ampiharo amin'ny akanjo, kiraro, tranolay ary fiarovana tanana sy fitaovana fitsaboana sns.
Ny vokarin'ny orinasa eto amintsika dia amidy mafana any Sina, manondrana firenena maro manerantany. Canada Fellfab Limited ho maso manokana any amin'ny faritra Amerika Avaratra. Fahamarinana, kalitao tsara indrindra ary serivisy ho toy ny hevi-pitantananay ary manolo-tena ho lasa mpitarika eo amin'ny laharana.
"Ny finoana tsara an'io, ny kalitao dia ny fanahy" no tanjon'ny orinasan'ny orinasanay, "ny fahitsiana, ny fahazotoana, ny fanantenana, ny fiaraha-miasa pragmatika, ny fanatsarana, ny fanavaozana" no soatoavin'ny orinasa.
Ekipa matihanina, fitaovana mandroso, kalitao azo antoka, serivisy azo antoka
1. fanaraha-maso kalitao henjana.
2. Fotoana fanaterana haingana.
3.Famokarana matihanina sy fanandramana manankarena.
4. vidiny mifanentana amin'ny serivisy avo lenta.
F: Afaka mahazo santionany ve aho? A
A: Ny mpanjifa vaovao dia antenaina handoa ny saram-pandefasana entana, raha toa ka maimaim-poana ireo santionany. Io fiampangana io dia hesorina amin'ny fandoavana ny filaminana ara-dalàna.
F: inona ny fizotry ny baiko?
A: fanaovana sary na famoronana sary → fanaovana santionany → fanandramana santionany → famokarana betsaka → fitsapana quanlity → fanangonana
F: Azo atao ve ny manao ilay slider fanao araka ny fangatahana?
A: OEM dia misy, ao anatin'izany ny fomba manokana, loko, sary famantarana, fonosana ...
F: Afaka mahazo fihenam-bidy ve aho?
A: Azo ifampiraharahana ny vidiny, azonay atao ny manolotra fihenam-bidy ho anao arakaraka ny hamaroanao.